Maitiro ekudzivirira netsaona faira kubviswa muLinux | Linux Vakapindwa muropa
Kunyangwe Gnu / Linux iri yakachengeteka kwazvo sisitimu yekushandisa, chokwadi ndechekuti dzimwe nguva zvinoitika kuti tinodzima mafaera nekutadza uyezve zvakaoma kudzoka. Izvi zvinogona kuitika uye zvimwe kana komputa yedu yakagovaniswa.
Tevere isu tinokuudza maitiro ekudzivirira iyi yekutenda kuchirongwa chinonzi rm-dziviriro, chirongwa che python icho chichatibatsira kunzvenga matambudziko aya uye kudzivirira matambudziko nemapurogiramu ekunze ekudzosa. Iko kushanda kwe rm-dziviriro kuri nyore kwazvo sezvo kunodzivirira kubviswa netsaona kwechero faira muGnu / Linux.
Kutanga isu tinofanirwa gadza iyo RM-Dziviriro chirongwa uye mune dzimwe nguva isu tinofanirwa kuisa yakakosha python plugins, yeizvi isu tinovhura terminal uye tinyore zvinotevera:
1 Arch Linux uye zvigadzirwa
2 RedHat / OpenSUSE
3 Debian / Ubuntu / zvigadzirwa
4 Kuiswa kweiyo rm- chirongwa chekudzivirira:
Debian / Ubuntu / zvigadzirwa
Kuiswa kweiyo rm- chirongwa chekudzivirira:
Kana chirongwa changoiswa, tinofanirwa kusarudza mafaera kana madhairekitori atinoda kunyora, nekuti izvi isu tinongofanira kunyora zvinotevera:
Kamwe kupinda kunodzvanywa, chirongwa ichi chichatibvunza mubvunzo wekuchengetedza nemhinduro. Mushure mekumisikidza izvi, pese patinoedza kudzima faira rakachengetedzwa, iyo sisitimu inoshanda ichatibvunza iwo mubvunzo watakatara kare uyezve tinofanirwa kuisa mhinduro yatakatangisa kare, sezvatakanyora, zvikasadaro ichapa kukanganisa uye hatizokwanise kudzima dura. Uye kunyangwe ichiratidzika kuva inonetesa, tinogona kuita chimwe chinhu senge nyora dhairekitori repamba uye uve nechokwadi chekuti mafaera haana kudzimwa netsaona.
Iyo sisitimu inoshandisa rm-dziviriro iri nyore uye chirongwa chine musimboti oparesheni, chimwe chinhu chatinogona kuratidza kutenda nekuda kwe github repository yechirongwa, asi inoshanda zvizere nekuti mubvunzo uchaita kuti tione zvatiri kuita uye kuti ndeipi faira ratiri kudzima.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Maitiro ekudzivirira netsaona faira kubviswa muLinux
«... zvakaoma kupora ...?»; Kune izvo zviripo zvirongwa zvakaita sePhotorec, chimwe chinhu kuisa zvakanyanya chengetedzo, chinova chimwe chinhu.
Ini handina kuzotoreresa faira ine photorec, ndinonetseka zvakanyanya kana ichibatsira chero chinhu
Photorec yangu yakandichengeta kubva pakuwanazve data rangu rese muKaOS, iro chete dambudziko randakawana gare gare nderekuti mafaira akadzorerwa ane rimwe zita remazita (f9017296.avi, kutaura muenzaniso).
Ini ndiri mutsva kuLinux world. Kwemakore ndanga ndichishuvira kudzidza nezveLinux asi ini ndakagara munzvimbo yangu yekunyaradza ine windows, kusvikira dhisiki rangu rakundikana uye kunyangwe ndakarimisa uye ndichiedza kudzoreredza windows 7 (kunyangwe w10) ini handina kukwanisa kuzviita uye ndafunga kuisa ubuntu 16. Ndisati ndafomata diski yangu yakatsigira yakawanda yeruzivo rwangu asi ndakarasa mimwe mifananidzo MuUbuntu ndakaedza kuzvidzorera nephotorec uye yakaburitsa akawanda maforodha aine akasiyana mafaera, kusanganisira mafoto, asi ikozvino handikwanise kudzima mafaera asingandifarire. Mumawindows zvaive nyore, pamwe kurudyi, pamwe chinja hunhu kana kushandisa chirongwa asi ini handizive kuzviita sei mu linux. Pane mumwe munhu anganditungamira ndapota? Ndatenda
Pindura kuna ldjavier
Ini ndinoshandisa iyo marara-ehl chirongwa, icho chinoita kufambisa mafaera kune marara pachinzvimbo chekuabvisa iwo sekunge yaive iyo rm yekuraira.
Iwo wekuraira marara asi ini ndinoisa alias kwairi, nekukurumidza kunyora. Inoshandiswa seizvi:
Haisi pfungwa yakanaka kugadzira alias rm nekuti ipapo unozoshandura PC yako, unozoshandisa rm uchifunga kuti hapana chinoitika uye xD mafaera achabviswa.
Zvandinoita kufambisa zvandinoda kudzima ku / tmp uye ini ndinongo fanira kuifambisa zvakare kana ndavhiringidzika.
Dambudziko nderekuti kana ukadzima komputa unorasikirwa nemafaira.
Kana iwe uchida kuve neyekusingaperi yemarara inogona, iwe unogona kugadzira dhairekitori uye kufambisa mafaera iwe aunoda kudzima ipapo uye neapo neapo kuichenesa (kana iwe uine chokwadi chekuti haudi iwo mafaera).
Joanna enriq akadaro
Gadzira mafaera asingachinjiki (asingachinjiki) kuti pasave nemushandisi, kunyangwe mudzi, anogona kugadzirisa kana kudzima asina kutanga abvisa hunhu 'husinga gadzirike':
$ chattr + i / path / filename
Hunhu 'husingachinjiki' hunobviswa seinotevera:
$ chattr -i / nzira / filename
Pindura kuna Joanna Enriq